Ejiji | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
FiNN FLARE, jaket ala: ihe nlele, ụdị na nyocha
Uwe dị mma ga-ahụ onye zụrụ ya mgbe niile. Ma abia na ihe sitere na uwa a ma ama ama aha ya bu FiNN FLARE, o nweghi obi abua - izutara ihe di otua ...
Kedu otu esi amata ụmụ nwanyị si ụmụ nwoke? Atụmatụ ndị ọkachamara
Ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị hụrụ jeans n'anya. Onye ọ bụla kwenyere n'ihe a o kwuru. Ọ ga - adị ka uwe a enweghị nsogbu, n'ihi na ọ dị oke mma na nwoke na nwanyị. Kaosinadị, nke a abụghịcha eziokwu. Isi ...
Vitacci - akpụkpọ ụkwụ dị elu maka fashionistas
Taa, enwere ọtụtụ ndị na-akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ. N'ime ha, enwere ike ịtụpụta Vitacci. A na-amata akpụkpọ ụkwụ nke ika a site na mma, oke na ịke. N'ebe a, ị ga - ahụ ọ bụghị naanị akpụkpọ ụkwụ chic heeled, mana ...
Uwe ụmụaka "Lappi Kids": nyocha, ọnụahịa, nkọwa
Ndị nne na nna niile na-echeta n'ụzọ zuru oke na ọmarịcha nwa ha, ma nke kachasị mkpa, ịga ije na-enweghị nchebe na-amalite site na nhọrọ nke uwe kwesịrị ekwesị. Ma ọ bụrụ na oge ọkụ, mbipụta a adịchaghị nnukwu ...
Chaatị Nkwa Ndị Uwe Nwanyi: Russia, USA, Italy, China
Girlsmụ agbọghọ niile nwere mmasị n'ịzụ ahịa, mana enwere ọnọdụ mgbe ọ bụla anaghị atọ ụtọ a. Mgbe ị ga-agbasi mbọ ike ma ọ bụ ịnọnyere nwatakịrị, ọ fọrọ obere ka ọ fọdụụrụ onwe gị, site na nke a
Chanel - uwe nke ụmụ nwanyị mara mma na ndị nwere obi ike
Na echiche mgbe ochie, uwe ụmụ nwanyị “Chanel bụ tweed deuce. Ọ mejupụtara uwe mwụda na jaketị. Onye ama ama ama ama kwuru na ezigbo nhọrọ kwesịrị ijikọ ma nwoke ma nwanyị ...
Akpa maka ndị ikom: ụdị na nkọwa. Otu esi choputa okpu maka nwoke
Ejirila akwa isi maka ụmụ nwoke maka ebumnuche ya kemgbe oge ochie. Ndị nnọchi anya mmekọahụ siri ike na-ekele maka ha gbanahụrụ oyi, okpomoku na ihe ndị ọzọ na-eme ikuku. N'oge a, okpu ndị ahụ aghọọla ...
Loafers: kedu ihe ọ bụ na ihe ọ ga-eyi ya
Ejiji na-agbanwe ngwa ngwa nke na ọ na-esiri ike mgbe ụfọdụ idobe ngwa ahịa ọhụrụ ya. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu maka nkọwa uwe ndị dị otú a dịka ndị na-azọ ihi ụra: kedu ihe ọ bụ na ihe ha zuru oke na…
Miss Fofo ala Jaketị: otu esi họrọ, nlekọta na ogo reviews
Oge oyi bụ oge ihe omume anwansi na ihe na-atọ ụtọ. Walgagharị, sịnịma, oge foto, na ịzụ ahịa na bọọlụ ọcha na-atọ ụtọ. Ọ bụkwa ihe na-atọ ụtọ ...
Gicha akpụkpọ ụkwụ na uwe. Uwe na akpụkpọ ụkwụ na-elekọta
Echiche dị mma gụnyere ịdị ọcha ogologo oge. Ilekọta ihu gị, ahụ gị, ụlọ gị, uwe gị na akpụkpọ ụkwụ gị akwụsịla ịbụ ihe na-adịkarị iche - ndị a bụ usoro dị mfe kwa ụbọchị nke na-enye aka na-eme ka ahụike ka mma. Mkpa ...
Uwe ejiji Faberlic: nyocha ndị ahịa
Uwe ejiji bu ihe eji eme uwe, nke n’enweghi nwanyi nke puru iche. Isi ihe abụghị imehie ihe mgbe ịzụ ahịa. Ihe kwesịrị ịma mma ma mara mma. Kwụọ ụgwọ ...
Etu ị ga - esi họrọ oke nkwakọ ngwaahịa ka ha wee dị egwu
Ihe na 15.09.2019 14.11.2019
Ke akpa ilekiri, ọ dị ka ọ nweghị ihe dị mgbagwoju anya ịhọrọ ebe nlegharị anya. Imirikiti ụmụ agbọghọ ji n’aka na ha maara etu esi ahọpụta oke maka sọks. Kedu otu ị ga - esi họrọ nke a na - enweghị mgbe niile ...
Uwe dị elu: gịnị ga-eyi? Nkwado izugbe.
Thedị uwe elu bụ nhọrọ dị mfe ma dị mma maka uwe maka ụmụ nwanyị ike gwụrụ idebe onwe ha na oke ụfọdụ. Uzo eji eji ejiji eji akpacha akpacha anya uwe, dika a napuru ya onye ozo. Ebe pụrụ iche…
OBARA - jaketị nke ụmụ nwanyị na nke ndị nwoke: nyocha
Ọnọdụ ihu igwe dị na mbara ụwa niile dị iche ebe niile, ebe ọ bụla ndị mmadụ ga - emeghari onwe ya ka ọ ghara ịnagide oke ọkụ, ebe ọ bụla na - enwe mkpọtụ mgbe niile, na ebe ọ bụla iji guzogide ọnọdụ dị ala, oyi na ajọ ifufe ...
Kedu ihe ị ga-eyi na akwa isi awọ? Ndụmọdụ Ejiji
Omenala, isi awọ di ka ihe di nfe na ndi ojii. Ọ dabara n'ụzọ zuru oke n'ime ọfịs, ụbọchị niile, nnọkọ egwuregwu na ihe nkiri egwuregwu. Ihe a dabere na otu i si eku ya n'ụdị na ndo ndo.
Kedu otu esi ahọrọ oge maka ndị enyi abụọ (foto)?
Can nwere ike iji ederede dị ezigbo mma yie ngosipụta nke ịhụnanya? Ee, ọ bụrụ na nke a bụ ihe dịịrị ndị hụrụ abụọ n'anya, nke onye na-ahọrọ ikwupụta mkpụrụ obi ya na ụwa na…
Ihe ị ga-enye 30 maka enyi: họrọ onyinye kacha mma
Afọ 30 bụ afọ ncheta siri ike. Agbanyeghị, nke a abụghị afọ nwa agbọghọ ahụ kwesịrị izo, ya mere ezumike, dịka iwu, a na-eme nnukwu ego. Y’oburu na a kporo gi n’ememe ahu,…
Amaja ugogbe anya anwụ Cat
Ugogbe anya maka anwụ "anya cat" ghọrọ ihe a ma ama n’ụbọchị kachasị mma nke Marilyn Monroe. Ma ụdị a ka na-achọkwa n'etiti ụmụ nwanyị n'ụwa niile. Ka emechara, onye ọ bụla ...
Niqab: gini bu? Nkọwa, foto
Ndị Alakụba bụ ndị ji okpukpe kpọrọ ihe. Ndị nnọchi anya ọdịbendị Alakụba na-agbasochi ụkpụrụ na iwu nke okpukpe anya. Iwu ndị a gụnyere ịkpa oke nke ndị inyom okpu kpuchite ntutu ha. Otu ihe ndi ozo nke ndi Arab na-edebe akwa ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,495.